Mareykanka oo $17 milyan siinaya Soomaaliya si ay uga caawiso la dagaalanka coronavirus - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo $17 milyan siinaya Soomaaliya si ay uga caawiso la dagaalanka coronavirus
June 18, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Safiirka Mareykanka Soomaaliya Donald Y. Yamamoto. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa $17 milyan siinaya Soomaaliya si ay uga caawiso jawaabta dalka ee ku aadan xanuunka coronavirus, sida ay war-saxaafadeed ku sheegtay Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya maanta oo Khamiis ah.
“Caawimaada ayaa gacan ka geysan doonta kahortaga iyo kantaroolka xanuunka, maaraynta kiisaska.” Sidaa ayaa lagu yiri war-saxaafadeed.
Mareykanka ayaa ah deeq-bixiyaha ugu weyn ee Soomaaliya, isaga oo $5.3 bilyan oo gar-gaar ah geliyay Soomaaliya 20-kii sanno ee la soo dhaafay, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka.
Soomaaliya ayaa 2,719 kiis iyo 88 dhimasho ah oo COVID-19 ah diiwaangelisay ilaa iyo hadda, sida ay sheegayso xogta Wasaaradda Caafimaadka.